အိန္ဒိယ သဘာဝဓာတ်ပုံပညာရှင် Arindam Saha နှင့် အင်တာဗျူး - ONE DAILY MEDIA
Arindam Saha ဟာ IBM တွင် အကြီးတန်း IT အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံပညာသည် သူ၏ ရေရှည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ Arindam ၏အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်များမှာ ငှက်များနှင့် အင်းဆက်များကဲ့သို့သော မိခင်သဘာဝ၏ အသွင်အပြင်များဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်က အခြားအရာများထက် သဘာဝ၏အလှကို ပိုတန်ဖိုးထားစေခဲ့သည်။ ငှက်များနှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများသည် သဘာဝတရား၏ မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံး ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပြီး ကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
— သင့်အကြောင်း အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးပါ
ကျွန်ုပ်သည် IBM တွင် အကြီးတန်း IT အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာသည် ကျွန်ုပ်၏ ရေရှည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ကာ ကိုယ်ခံပညာကိုလည်း ဝါသနာပါပြီး အဆင့် ၄ အနက်ရောင် ခါးပတ်တစ်ခုလည်း လုပ်ထားတယ်။ အခုချိန်ထိ ဒါကို အချိန်ရတိုင်း လေ့ကျင့်နေပါတယ်။
— အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကလေးဘဝအမှတ်တရများ ??
ငယ်ငယ်တုန်းက ဝါသနာက ပန်းချီဆွဲတာဖြစ်ပြီး ဒါက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ အကြီးမားဆုံးအချက်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးတာက တခြားအရာတွေထက် သဘာဝရဲ့ အလှတရားကို ပိုတန်ဖိုးထားစေခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
— ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံပညာအပေါ်ရူးသွပ်လာခဲ့လဲ ??
ကျွန်တော့်ဇနီး လက်ဆောင်ပေးသည့် ပထမဆုံး DSLR ကင်မရာ Canon 1100D ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် SLR ဖြင့် ဓာတ်ပုံပညာကို ဝါသနာပါသူအဖြစ်မှ လေးနက်သော အခြားဓာတ်ပုံပညာဘွဲ့ တစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံး၏ နောက်ကွယ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အကြီးမားဆုံးသော လှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားပေးကူညီမှု ရင်းမြစ်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အကြီးမားဆုံးသော ဝေဖန်ရေးသမားနှင့် ကျွန်ုပ်၏ အရင်းနှီးဆုံးသူဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ စွန့်စားမှုမှာ ဒီဓာတ်ပုံတွေက ငါ့ရဲ့လက်ရာကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဓာတ်ပုံပညာရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေအကြောင်း ပိုသိလာစေဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ နဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုအချို့ကို ပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။
— သဘာဝဓာတ်ပုံပညာကို ဘယ်လိုစတင်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါလဲ ??
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးတာက viewfinder ကတဆင့် တခြားအရာတွေထက် သဘာဝရဲ့ အလှတရားကို ပိုတန်ဖိုးထားစေခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
–ဓာတ်ပုံပညာက တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ??
ဓာတ်ပုံပညာဟာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကမ္ဘာကြီးသည် လူမှုကွန်ရက်/မီဒီယာများမှတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဤနယ်ပယ်များတွင် ဓာတ်ပုံပညာက တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဖော်ပြရန်အတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါတယ်။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံ/ဓာတ်ပုံဂျာနယ်များမှတစ်ဆင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ပြဿနာများ/ခြိမ်းခြောက်မှုများအကြောင်း အကြောင်းကြားချက်များ ရရှိနေပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဓာတ်ပုံဆရာများ ပံ့ပိုးပေးနေသည့် အသိပညာပေး အစီအစဉ်များရှိတာကြောင့် အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
–ရိုက်ကွင်းအတတ်ပညာ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်ကို ကျွမ်းကျင်ရန် မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ နှစ်ခုကို ဘယ်လိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ပြီး cliche ပုံတစ်ပုံကို ရှောင်မလဲ ??
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခိုက်အတန့်တစ်ခုရရှိရန် နှင့် တိရစ္ဆာန်များ၏ အပြုအမူကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါတယ် ။ ထိုရိုက်ကွင်းတစ်ခုသို့ မသွားမီ လူတိုင်းသည် မျိုးစိတ်များ၏ အခြေခံအမူအကျင့်/သဘောသဘာဝကို သိရှိထားသင့်သည်၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏ဖြစ်ရပ်များကို နားလည်နိုင်ပြီး ၎င်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရိုက်ချက်ကို ရယူနိုင်မှာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွမ်းကျင်နားလည်နေဖို့ အမြဲကြိုးစားပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေရဖို့အတွက် ကူညီပေးပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှုမှာ အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တစ်ခုကို ဖမ်းယူဖို့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အမြဲတမ်း 2nd / 3rd ဆိုပြီးအခါခါ ကြိုးစားယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်များ သို့မဟုတ် မျိုးစိတ်များကိုသိရန်အတွက် တူညီသောနေရာသို့ အထပ်ထပ်သွားရောက်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
— ဓာတ်ပုံများက မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးစိတ်/တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အနည်းငယ်အပေါ် လူတွေရဲ့သဘောထားတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ??
မျိုးစိတ် သို့မဟုတ် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ အပေါ်စိတ်နေစိတ်ထား၊ အပြုအမူများဟာ အသိပညာ ၊ အသိအမြင်ပေါ်တွင် မူတည်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအကြောင်း အမှန်တရားကိုသိရှိရန် အကြီးမားဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူမှုကွန်ရက် အသီးသီးတွင် ဤကိစ္စရပ်ဟာ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါတယ်။ လူတွေဟာ
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ သတင်းအချက်အလတ်တွေကို ရယူနေကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနောက် လူများသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို စတင်ချစ်မြတ်နိုးလာကြသည်ကို အကြိမ်များစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။
— သဘာဝ တောတွင်းဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပထမဆုံးစတင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြီးမားဆုံးအမှားက ဘာဖြစ်မလဲ ??
ပထမအကြိမ် DSLR ကို စသုံးတုန်းကတော့ Mode အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်တင်တွေကို သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ အော်တိုမုဒ်ကို စနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။
— ဓာတ်ပုံပညာကနေ သင်ယူခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေချင်ပါသလား ??
ပုံများကို စိတ်အားထက်သန်မှု/ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပေါ်အခြေခံပြီး ရိုက်ယူပါ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြွက်ဝင်ပေါက်များလို နေရာကနေ ဝင်မတိုးပါနဲ့။
— ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ post-processing နည်းပညာများကို မျှဝေနိုင်ပါသလား ??
ကျွန်ုပ်ဟာ Photoshop Creative Cloud နှင့် Canon Digital Photo Professionalကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ ရိုက်ကွင်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေကို ရနိုင်မယ်လို့ ပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
— အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံပညာရှင် ??
Dr Krishnamohan Prabhu
— ရရှိခဲ့ဖူးသည့် အကောင်းဆုံးဆု ??
National Geographic အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်
— ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမစခင် ဘာတွေပြင်ဆင်လဲ??
-နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်၏ကိရိယာအားလုံးကို အပြန်အလှန်စစ်ဆေးပါတယ်
— လက်စွဲဆောင်ပုဒ် ??
— ဘဝရဲ့သူရဲကောင်းတွေကဘယ်သူလဲ ??
အထူးတလည်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို အရမ်းချစ်တယ်၊ သူတို့က ကျွန်တော့်ရဲ့ တကယ့်ဘဝသူရဲကောင်းတွေပါပဲ
— အချစ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ ??
ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံး စိတ်ခံစားမှုပါပဲ။အချစ်မရှိရင် ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။
— ဝါသနာနှင့်စိတ်ဝင်စားသောအရာများ ??
ဓာတ်ပုံပညာသည် ကျွန်ုပ်၏ ကလေးဘဝအိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ခံပညာကိုလည်း ဝါသနာပါပါတယ်။
— တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် ဤအခွင့်အရေးကို ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။